Manome lanja ny fiainanao manokana izahay
Manome lanja ny fiainana manokana anananao izahay. Tsy mivarotra sy manofa na manofa fampahalalana azo fantarina izahay (ao anatin'izany ny adiresy imailaka, ny laharana an-tariby, sns) momba ny mpanjifantsika amin'ny olona rehetra. Tsy ho solonay amin'ny telefaona na mailaka izahay. Izay vaovao atolotrao anao dia hampiasaina am-pahombiazana, raisina am-pitandremana sy fiarovana azo antoka, ary tsy hampiasaina amin'ny fomba izay tsy ekenao.
Momba ireo vokatra
Momba ny fonosana
fampiasana fonosana tsotra, isaky ny napetraka ao anaty harona plastika, na seta 10 ao anaty kitapo plastika lehibe, na namboarina manokana.
Ny haben'ny habe
Azafady mba jerena ny fizarana "habe" ao amin'ny vokatra tsirairay mba hahitana tsipiriany bebe kokoa. Momba ny tabilao habe, tsidiho azafady: tabilao habe
Manaiky ny toeran'ny OEM ve ianao ary inona no farafahakeliny indrindra amin'ny toe-javatra OEM?
Eny, raisina ny fepetra OEM ary ny habetsaky ny fatra indrindra miankina amin'ny zavatra alaivo. Ary alefaso azafady ny sary modely mazava izay tadiavinao aminay, halefantsika ho an'ny Designers izahay, rehefa avy manana ilay fitaovana izahay dia afaka mamokatra ho anao ara-potoana. Raha tsy izany dia hotadiavinay ireo ho anao, ary avy eo ny vokatra. ary alao ny santionany amin'ireo entana hafa alefanao ho anao, mba hahafahanao manamarina.
Mampiasa lamba kalitao avo lenta isika, izay mora ahitàna moramora ho an'ny milomano milomano, ary polyester 100% ho an'ny kiraro fotsifotsy, na namboarina.
Momba ny vidiny sy ny fandoavam-bola
Azonao atao ny mandefa hafatra na manontany anay, lazao aminay ny modely tsy misy ireo vokatra tianao sy ny haben'ny nangatahana, dia halefanay aminao izany.
Manolotra fihenam-bidy ho an'ny habetsahana samihafa izahay, azafady mba hifandraisa amin'ny fangatahana ny habetsaky ny habetsanao.
Ny fampahalalana momba ny fandoavam-bola sy ny banky
Izahay dia manaiky ny carte de crédit, Bank Transfer. Soka kely na santionany, manaiky ny fandoavantsika an-tserasera mivantana izahay.
Raha te handoa ahy amin'ny Banky ianao dia azafady mba hifandraisa aminay.
Mikasika ny fotoana fandoavam-bola
Izahay dia manaiky ny fandoavam-bola eo noho eo amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny carte de crédit. Ny fandoavana ankapobeny dia tsy maintsy atao ao anatin'ny 3 andro. Raha misy antony hanemorana ny fandoavam-bola, dia miangavy anay hifandray aminay aloha. Misaotra anao.
Inona ny habetsahan'ny baiko farany ambany?
A: ho an'ny stock stock anay, ny MOQ dia ho 10 pcs isaky ny style / loko.
Ary ho an'ny endrika namboarina manokana, MOQ: tapa-200 isaky ny fomba / loko.
Afaka manao ohatra ho anay ve ianao?
A: Eny, saingy tokony handoa santionany sy ny vidin'ny courier ianao. Azonao atao ny mandefa anay ny antsipiriany amin'ny antsipirihany santionany mba hahafahantsika manara-maso ny vidin'ny fotoana sy ny santionany, aorian'ny handraisanao ny fandoavanao, dia handamina avy hatrany ny laharana santionanao ianao.
Azonao atao ny manampy ny marika famantarana ny tenantsika manokana amin'ireo vokatra?
A: Eny. Manolotra ny serivisy hanampian'ny marika mpanjifa izahay, azafady alefaso amin'ny endrika format PDF na AI ny sary.
Ahoana ny fomba fandefasana?
Handeha amin'ny alàlan'ny fonosana ekspres iraisam-pirenena EMS / DHL / UPS / TNT izahay, na handeha an-dranomasina raha mihoatra ny 1cbm ny baiko, fa miankina amin'ny habetsahana izany.
Amin'ny ankapobeny dia mitaky ny andro fiasana 3-4 eran'izao tontolo izao amin'ny UPS, ary 5-7 andro fiasan'ny EMS (afa-tsy i Rosia), ary 4-5 andro miasa amin'ny TNT / DHL miankina amin'ny faritra misy anao.
Momba ny fotoana fandefasana
Rehefa miomana mametraka baiko ianao dia hanamarina ny baikonao aloha ary avy eo handefa ny invoice aminao ao anatin'ny 24 ora. Ary ho an'ny entana tahiry izay hatolotra ao anatin'ny 7 andro, raha tsy izany, hanamafy ny fotoana fandefasana miaraka aminao izahay.
Lazao amiko ny vidin'ny fandefasana alohan'ny baiko
Ny vidin'ny fandefasana dia miankina amin'ny lanja, ny haavo ary ny fomba fandefasana (EMS, DHL, TNT, UPS, na ny fitaterana an-dranomasina) sy ny firenena. Sarotra ho anay tokoa ny manambara andoavana fandefasana alohan'ny handefasana baiko ( ny lanjan'ny bisikileta tokana iray dia manodidina ny 0.2kg, fa ny lanjan'ny volony kosa eo amin'ny 0.5kg / pc). Ary azonao atao ny misafidy ny orinasa fandefasana izay tadiavinao ary hodinihinay ihany koa ny rehetra amin'ny express ary manolotra ny fomba mety indrindra ho anao.
Momba ny Famerenana & Fepetra
Ampifantohantsika amin'ny kalitao ny kalitaon'ny serivisy sy ny serivisy, koa alohan'ny andefasantsika ny fonosana dia mila manamarina ny vokatra indroa isika ary fonosinay ny fonosinay.
Ahoana no hiatrehana ny raharaha, raha toa ka tsy malemy ilay zavatra?
Miala tsiny fa tsy voadidy ilay entana, ary hiatrika fiasa mahery setra izahay. Mila ny fanampianao koa izahay.
Voalohany: Raha tsy mety ilay entana, dia ampahafantaro anay ao anatin'ny 3 andro aorian'ny fandefasana.
Faharoa: azafady alefaso ny sarin'ilay entana, ary alefaso aminay ny sary amin'ny alàlan'ny mailaka, mba hahafahako mametraka azy ireo amin'ny Tale Jeneralintsika, rehefa avy nijery sy nanaiky izy, dia hanampia ireo vaovao ireo ao amin'ny baikonao manaraka. maimaim-poana.
Ny fiverenana sy ny fanafoanana ny politika
Mba hanomezana tolotra ho an'ny mpanjifa mora kokoa, manaiky ny famerenam-bola izahay ary manafoana ny filaminana ao anatin'ny 24 ora.
Ambonin'ny zava-drehetra, misaotra amin'ny fametrahana filaminana ao amin'ny tranokalanay www.stamgon.com . Ny fahafaham-po omena anao no loharano mandrisika anao indrindra.
Nametraka ny pejy izahay mba hahafahanao mahita ny fomba fanaraha-maso ny fomba fiasa mifandraika amin'ny orinasa ary manantena fa afaka manampy anao hamita ny fanaraha-maso ny famandrihana ny baiko.
Midika izany fa navoakanay ny baikonao rehefa nahazo ny isa fanenjehana ianao. Azonao atao ny manamarina ny toe-piafaran'ny fonosanao amin'ny takelaka fanaraha-maso . Ny fanontaniana rehetra dia mba anontanio anay malalaka!
PS: Indraindray manaparitaka ny fanavaozana ny vaovao ao amin'ny tranonkalany. Koa avelao ah hanam-paharetana ianao ary zahao kely dieny aoriana kely. Hankasitrahana tokoa ny fahazoanao azy, misaotra!